Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab iyo dad shacab ah oo maanta dagaal ku dhexmaray gobolka Mudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab iyo dad shacab ah oo maanta dagaal ku dhexmaray gobolka Mudug
Wararka ka imaanaya deegaanka Dumaaye oo hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab iyo dadka degaanka halkaas.
Dagaalkaan ayaa la sheegayaa inuu bilawday kadib markii Al-shabaab ay dadka deegaanka ku amreen inay bixiyaan wax ay Al-shabaab u yaqaanaan Zakaawaat, taas oo dadka deegaanka ay si weyn uga hor-yimaadeen.
Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay dagaalka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana maanta deegaankaasi laga maqlayay rasaas iyo madaafiic ay labada dhinac halkaasi isku dhaafsanayeen.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ku dhawaad 15 qof, iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay, kuwaas oo dhamaantood isugu jira labada dhinac iyo dad shacab ah.
Dadka dhaawaca ah ayaa sida la sheegay loo qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Xaradheere, waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah dhaawacyadiisa ay aad u culus yihiin.
Dhinaca kale, xaaladda deegaanka Dumaaye ee gobolka Mudug ayaa haatan ah mid degan, waxaana weli isku horfadhiya dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay, iyadoo mar walba la filan karo in markale uu halkaasi dagaal ka qarxo.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalkaan ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan dagaal sidaan oo kale uu deegaankaasi ku dhexmaray dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab iyo dadka degaanka, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.